सोमवार, असार २२, २०७७ ०३:२८:०८ Monday,6July, 2020
मानवमा जाति तथा उत्पत्ति, पेसा, वर्ण, लिङ्ग, अनि क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभाव नै जातीय विभेद हो। जातीयताका आधारमा सार्वजनिक स्थान, मठ मन्दिर, पूजाआजा, भोज भतेर, पाटी पौवा, सेवा प्रवाहमा प्रवेश गर्न निषेध गरिने, प्रतिबन्ध लगाउने, बहिष्कारमा पारी दुव्र्यवहार गर्नु नै छुवाछूत हो । यो जघन्य सामाजिक अपराध हो।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको कसुर मानव मर्यादा विरुद्धको कसुर हो । सामान्ती राज्यसत्ताका कारण एउटै मानव जातीमाथि शोषण, दमन गरी आफ्नो राज्यसत्ता टिकाई राख्ने उद्देश्यले विभिन्न जातजातिको नामकरण गरिएको छ। पेशाकै आधारमा उचो निचो जाति बनाए। सुन फलामको काम गर्नेलाई कामी, सुनार, लोहार, लुगा सिलाउने, बाजा बजाउनेलाई दमाई र जुत्ता सिलाउनेलाइ सार्की भन्ने जस्तै काम र पेशाको अनुसार जाति बनाई अछुत जातिको घोषणा गरी जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई बढवा दिएका छन। मानब प्रजातिलाई जातमा वर्गिकरण गरेर भेदभाव गर्ने कुसंस्कारको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि हामीले छुवाछुत प्रथा भोग्दै आएका छौ ।
नेपालको संविधान र कानूनमा छुवाछुत गर्नु सामाजिक अपराध हो भनि घोषणा गरिएपनि छुवाछुत र दलितमाथिको उत्पीडन तथा भेदभाव हटेको छैन। सैदान्तिक हिसाबले छुवाछुत र जातिय भेदभाव विरुद्ध विभिन्न कालखण्डमा सरकारहरुले धेरै थोरै बोले पनि कार्यन्वयन निकाय कमजोर हुँदा व्यवहारिक रुप दिन सकेनन् । फेरी पनि उत्पीडन रोकिएको छैन । अझै भन्नु पर्दा संविधानको खोष्टामा जे जस्तो लेखेको भएपनि, गणतन्त्र नेपालले अझै पनि छुवाछुत भेदभाव काँधमा बोकेर हिडिरहेको छ। गलत सामाजिक भेदभाव विरुद्ध कानूनी प्रावधान बलियो बनाइसकेको भएपनि लागू हुुन सकेको छैन । फेरी पनि दलितमाथिको अन्याय अत्याचार, छुवाछुत, भेदभाव र गलत संस्कृतिका विरुद्ध जनचेतना फैलाउन अनिवार्य छ । हामी सबै जागरुक भएर एकजुट हुन आवश्यक भएको छ।
२१औं सताब्दी र गणतन्त्र मुलुकका दलित समुदाय उस्तै उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। देशमा दलितमाथिको छुवाछुत, भेदभाव जारी छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक उत्पीडन बढदो छ । दलित समुदायलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग बनाईएको छ। दलितमाथि कुटपिट, भेदभाव, हत्या हिंसाका घटनाहरु दलित समुदायमाथि धेरै भएका छन। दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कार्वाही गरि पिडितलाई न्याय दिइने कुरामा समेत राज्य चुकेको छ ।
कुसंस्कार हटाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै सकारात्मक तरिकाबाट जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ। समाजमा सबैलाई समान व्यवहार गरेर एकाकार हुनका लागि जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायले अन्तर्घुलन जस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ।
बिदेशीसंग हाम्रा छोरा, छोरी बिहे गर्दिनको लागि जात धर्म वर्ग आवश्यक पर्दैन तर नेपाली नेपाली बीच विवाह गर्न हाम्रो लागि जात तगारो बन्छ। हामी अर्को धर्मका बिदेशीलाई खुशी खुशी घर भित्र्याउन, हाम्रा मन्दिर, कुल देवता, चुलो चौकामा लान सक्छौ तर तथाकथित दलितलाई भेदभाव गर्छौं । हामी नेपाली कुन संस्कारमा छौं, सोच्नु पर्ने समय आएको छ।
हामी सबैले कामीले बनाएको भाँडामा खाना बनाउछौं, कामीले बनाएको गहना लगाएर सजिञ्छौं, कामीले बनाएको मूर्तिलाई पूजा गरेर धर्म कमाउँछौं, दमाइले सिलाएको कपडा लगाएर आफ्नो शरीर ढाक्छौं, दमाइले बजाएको बाजागाजामा नाँच्छौ भने सार्कीले सिलाएको जुत्ता लगाएर हिड्ने गर्छौ। उनीहरुको शीप चल्ने, पौरख चल्ने तर पानी नचल्ने आखिर किन? जातीय विभेद विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ, जनचेतना जगाउनु पर्छ । समय संगै धेरै कुरा परिवर्तन भयो तर नेपाली सोचमा कहिले परिवर्तन आएन अझ कति तथाकथित दलितले जातको आधारमा ज्यानको बलिदान दिनु पर्ने हो थाहा छैन, कति दमाई, कामी र सार्की मारिने हुन्।
सरकार! हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आयो! गणतन्त्र आयो! आमूल परिवर्तन भयो भनेर नारा जुलुस पनि गर्यौ खुशीयाली मनायौं तर जातीय भेदभाव अन्त्य भएको खोइ ? आज जातीय विभेदकै कारण कतिले अकालमै मारिनु परेको छ भने कतिले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु परेको छ। सरकार अति भयो जातको आधारमा भेदभाब, जातको आधारमा छुवाछुत, यसको लागि कि त कानूनलाई कार्यान्वयन गरेर हरेक प्रकारको भेदभाव रोक्नु पर्छ नत्र फेरि उत्पीडित जनसमुदायले अर्को जनआन्दोलन शुरु गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ तसर्थ सरोकार निकायको ध्यान यथासक्य पुग्न जरुरी छ ।
हामीमा कुनै पनि फरक छैन भनि बुझाउँनका लागि प्रचार–प्रसार गर्न लगाई जनचेतना जगाउनु आजको आवश्यकता र समयको माग हो। मानव मानव भएर बाँच्न पाउनु नै छुवाछूतको अन्त्य गर्नु हो । त्यसैले हामीले यस कुप्रथा बिरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउन जरुरी छ भने सरकार र समाजलाई चेतावनी दिदै परिवर्तनको धारमा एकढिक्का भएर उभिनु पर्छ।
आजको एकता नै भोलिको समाज परिवर्तनको मुख्य सम्बाहक हुनेछ । हामीलाई कुनै पनि जातिय भेदभाव र छुवाछुत स्वीकार्य छैन र यसको बिरुद्ध हामी आवाज उठाउने छौं अनि कुरीति कुसंस्कार बिरुद्ध लड्ने छौं ।